Mɛyɛ Dɛn Na Manyɛ Kɛse Pii? | Mmabun
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Mɛyɛ Dɛn Na Manyɛ Kɛse Pii?
Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ ‘ yɛnkari pɛ wɔ yɛn nneyɛe mu. ’ (1 Timoteo 3:2) Sɛnea woyɛ w’ade wɔ aduan ho nso ka ho. Adɛn nti na wonsɔ nea edidi so yi nhwɛ?
Ɛyɛ a tie wo yafunu. Julia yɛ ababaa a wadi mfe 19. Ɔka sɛ, “ kan no na mekari aduan a midi, sɛnea ɛbɛyɛ a minni mmoro so, nanso seesei de sɛ meredidi na mete nka sɛ mamee pɛ, na magyae di. ”
Nni aduan a ɛbɛhaw w’akwahosan. Peter yɛ aberante a wadi mfe 21. Ɔka sɛ, “ bere a migyaee nsa dɔkɔdɔkɔ nom bosome baako pɛ no, me so tew kilogram nnum! ”
Sɛ wunnidi yiye a, yɛ nsakrae. Erin yɛ aberante a wadi mfe 19 na ɔka sɛ, “ mefa aduan na meredi a, mebɔ mmɔden sɛ merensan nkɔfa bi nka ho. ”
Nea Ɛbɛma Woanya Nkɔso: Ɔkɔm de wo a didi! Sɛ woanyɛ saa na woma ɔkɔm de wo pii a, wode ɔkɔm anibere bedidi aboro so.
Nokwasɛm ne sɛ, nnipa binom a wɔka sɛ wɔpɛ sɛ wɔn so tew no nnim sɛnea nipadua a ɛyɛ fɛ te. Ebia sɛnea wɔn nipadua te no, mfomso biara nni ho. Nanso sɛ ehia sɛ wo so tew nso ɛ? Hwɛ nea ɛboaa ababaa bi a ne din de Catherine.
Ɔka sɛ, “bere a minnya nnii mfe aduonu mpo no, na me sõ pa ara, nanso na mempɛ no saa. Ná m’ani nnye sɛnea na mete no ho koraa!
“Ɛwom ara a, midi nnuan pɔtee bi sɛnea ɛbɛyɛ a me so bɛtew, nanso meyɛ ara a na masan abesi me dedaw mu. Enti bere a midii mfe 15 no, mekaa sɛ ehia pa ara sɛ meyɛ nsakrae. Ná mepɛ sɛ mefa ɔkwampa so ma me so tew sɛnea ɛbɛyɛ a me nkwa nna nyinaa merensan nkɔ me dedaw mu.
“Enti metɔɔ nhoma bi a ɛka aduan ne apɔwmuteɛteɛ ho asɛm. Mede nea mekenkanee no yɛɛ adwuma wɔ m’asetenam. Enti meka kyerɛɛ me ho sɛ, nea mede asi m’ani so no, sɛ biribi bɛbom mpo a, meremma m’aba mu mmu.
“Dɛn na afi mu aba? Akɔ yiye pa ara! Bɛyɛ afe baako ntam no, me so atew bɛyɛ kilogram 27, na akɔ so saa ara mfe mmienu ni. Manso ho dae da!
“Misusuw sɛ, nea ɛma mitumi yɛɛ wei ne sɛ, mantew aduan a midi so kɛkɛ, mmom meyɛɛ nsakrae wɔ m’asetenam.”​—Catherine, madi mfe 18.
Apɔwmuden​—Adwene Ne Nipadua Mu Asomdwoe Ne Anigye Mmabun Bisa Sɛ Mmabun